Pasili | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Nri pasili akwukwo nri ma obu na obu?
O siri ike ịchọta onye na-enweghị mmasị pasili. Dị ka a na-achị, a na-ejikarị okwu a na-eme ka okpukpu dị ụtọ, ma onye ọ bụla na-arụ ọrụ ụlọ maara na mgbọrọgwụ nke osisi a abụghị ihe na-esi ísì ụtọ ma dị oke ọnụ karịa akụkụ ahụ dị n'elu, ya mere, a na-akpọ pasili oge ụfọdụ, ihe ndị ọzọ, ihe ọkụkụ. Kedu ihe bụ ọdịbendị a, ihe ndị dị na ya, otú o si dị iche na ụdị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ - a ga-atụle ihe a niile na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na nyocha a.
Ngwọrọgwu ọgwụ nke ngwugwu pasili na ojiji ya na nkà mmụta ọgwụ
Pasili bụ otu n'ime ihe oriri kachasị amasị nke ọ bụla n'ime ụlọ. Ịgba nri nwere ike imezu ma anụ anụ na akwukwo nri, na azụ. Otú ọ dị, ọ bụ mmadụ ole na ole maara ihe bara uru nke mgbọrọgwụ nke ahịhịa ahụ na-ekpo ọkụ, yana ihe ngwọta nke ụzọ dị iche iche dabere na ya. Isiokwu a ga-eleba anya n'ụzọ doro anya na esi esi mgbọrọgwụ pasili, otú o si dị mma maka ahụike, na otu esi esi nri ya n'ụzọ ziri ezi.
Atụmatụ iji pasili dịka diuretic
Uru na ngwọta nke njirimara nke pasili bụ n'ihi ọtụtụ ihe ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma bụ ndị mejupụtara akụkụ nile nke osisi ahụ. Akụkụ a na-etinye aka na mmetụta diuretic, nke nwere osisi na-eto eto. Ma pasili bụ Parsley diuretic, bụ otu n'ime ihe ndị a na-ahụkarị na mmanụ ọkụ na-esi na ya na-eme ka nri dị ụtọ na nri ndị na-esi ísì ụtọ, bụ ihe oriri.
Mkpụrụ ọgwụ nke pasili infusion
A na-eji pasili mee ihe dị ka ihe sizuga maka efere dị iche iche. Mmetụta na teas sitere na ya nwere ike iweta uru dị ukwuu n'ahụ. Ọ bụrụ na ị mụta otú ị ga-esi kụtuo ya n'ụlọ, ị nwere ike ịnụ ụtọ ihe ọṅụṅụ na-atọ ụtọ ma nweta ọgwụgwọ. Gụkwuo banyere pasili infusion na ngwa ya ga-ekwu okwu n'isiokwu ahụ.
Kedu esi akụ pasili maka uto ngwa ngwa?
Were ya na ogige na-enweghị pasili bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume, ọ na-etolite ma maka mmepụta nke akwụkwọ nri mgbọrọgwụ na nke na-esi ísì ụtọ, bụ nke a na-eji mee ka nsị dị iche iche dị ụtọ. Kedu otu esi eme ka pasili dị na windo sill ma ọ bụ n'ubi, ị ga - esi hụ na mkpụrụ osisi dị mma na ngwa ngwa, ịnwere ike ịmatakwu ihe ndị ọzọ.
Atụmatụ nke ngwa nke ice pasili cosmetic ice cubes
Nne ọ bụla nrọ maka ihu ọma na toned ihu. Otú ọ dị, ọ chọrọ ka ọ na-elekọta ya maka obere oge, ma iji nweta ihe kachasị. N'okwu a, ọ na-enyere aka mma maka ụlọ. Ndị a na-ewu ewu karịsịa bụ ice cubes mere site na mmiri dị ọcha na mgbakwunye nke ụfọdụ herbs.
Ụzọ mbuso pasili ọrịa na pests
Onye oru ugbo obula choro inweta ihe ubi n'ubi, ma obughi mgbe obula. Ọtụtụ mgbe, pests na-awakpo nri ma ọ bụ ọrịa. Ihe ubi a na-enwe site na nhụjuanya ndị a, n'ihi ya, ọ dị gị mkpa ka a na-eduzi gị na nsogbu nke nsogbu ubi ma nwee ike ịme ihe iji dozie ha.
Esi eji pasili maka ọgwụgwọ edema
Ogige pasili ebe obibi abụghị nanị ose ma ọ bụ ndị na-azụ ihe na vitamin na microelements. Ọ nwere ike inye aka na ihe dị egwu dị ka edema. A na-eji ihe onwunwe a na nkà mmụta ọgwụ. Anyị na-amụta ihe pasili dị irè maka mgbe ọzịza, ihe ndị na-eme ka a ghara iji ya mee ihe, otu esi emeso ikuku na ụkwụ.
Njirimara bara uru na usoro nke iji pasili osisi
Ọbụna ndị Gris oge ochie maara banyere ihe ngwọta nke pasili, taa, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ a na-ewu ewu na mpaghara dị iche iche nke nkà mmụta ọgwụ. Ma ọdịdị dị otú a adịghị enweta mkpụrụ nke osisi a, bụ nke a na-atụfu ma ọ bụ gaa na-azụ ehi. Na n'efu, n'ihi na ha mejupụtara ha fọrọ nke nta ka ha dị ka akwụkwọ chara acha.
Akụkụ pasili iji meziwanye kwa ọnwa
Ahụ nke nwanyị ọ bụla bụ onye ọ bụla, ya mere, ọnwa ọ bụla maka ụfọdụ anaghị enwe ike. N'ime otu ọnwa, nsọ nsọ nwere ike ịmalite mgbe ụbọchị iri abụọ na anọ gachara, mgbe ọzọ, ụbọchị 30 gasịrị. Ihe dị iche na ntụgharị ahụ na, ya mere, oge igbu oge nke 2-6 na-ewere dị ka nkịtị. Ma e nwere ọnọdụ mgbe ndị inyom na-agbalị ịkpọ kwa ọnwa n'ụzọ ọ bụla na ọbụna ọsọ ọsọ.